China Luxury Matte Nhema Filtered Shower Musoro Mugadziri uye Mutengesi | Xinpaez
Matte Nhema anopedza-Wako ruoko shawa rinotaridzika kushamisa. Matte matema anopedza anotendeuka misoro.
Kaviri mafirita- Dhizaina dhisiki ine marozari, bata firita: PP donje, Carbon fiber, Vitamin C
Matte Nhema Wako ruoko shawa rinotaridzika kushamisa. Matte matema anopedza anotendeuka misoro. Iyo yakasarudzika yakakwana matte nhema kupera inogoneka. Vanoigadzira kuitira kuti iwe ugone kuchenesa uye kuchengetedza matte nhema ruoko shawa kupera pasina kushandura chimiro chayo. Zvese Xinpaez's matte pendi ekuchengetedza zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakanyanya pasina iyo silicones, waxes uye mafirita, zvinoreva kuti havazowedzere kubwinya uye kukanganisa matte chitarisiko. Vanhu vanofarira kutaura matte kukwenya zviri nyore pane kupenya, asi izvo hazvisi zvechokwadi! Matte pendi haisi yekutsvaira-humbowo, zviripachena, asi iwe haungambove uine nharo nemasaini mamaki kana chidiki.
YAKAVAKIDZWA-MUMVURA MWEFILITI kununura zvakapfuura yakawanda-nhanho kusefa kwemvura kwehutano, ganda rinotaridzika-diki & nevhudzi.
Pashure: Yakakwira Pressure Shower musoro- Chrome yakarongedzwa
Zvadaro: Mufashoni Mvura Inochengetedza Ruoko Shower Musoro
shawa musoro wemvura yakaoma
shawa musoro nemabheji